Baiboly pejy 48 - Ny Baiboly
Voalohany < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Manaraka Farany
Eksaody toko 29 (tohiny)
16hianao kosa hamono ny ondralahy sy hananty ny rany ary handraraka izany manodidina ambony otely. 17Teteho ny ondralahy ary rehefa voasasanao ny taovany sy ny ranjony dia hapetrakao eo ambonin'ny tetiny sy ny lohany; 18dia hodoranao hanetona eo ambony otely ny ondralahy manontolo. Sorona dorana ho an'ny Tompo izany, hankasitrahany ny fofony, fanatitra atao amin'ny afo ho an'ny Tompo.
19Alao koa ny ondralahy faharoany, ka Aarona sy ny zanay hametraka ny tànany ambony lohan'ny ondralahy. 20Hianao hamono ny ondralahy dia haka amin'ny rany, ka hantentinao amin'ny tendron-dravintsofina ankavanan'i Aarona, sy amin'ny tendron-dravintsofina ankavanan'ireo zanany, ary amin'ny ankiben-tànany ankavanana, mbamin'ny ankiben-tongony ankavanana, ary hararakao manodidina eo ambonin'ny otely ny rà. 21Makà amin'ny rà izay eo ambony otely, sy ny diloilo fanosorana, ka fafazo amin'i Aarona mbamin'ny fanamiany, sy amin'ny zanany mbamin'ny fanamiany dia ho voahasina avokoa izy, na ny tenany amam-panamiany na ny zanany amam-panamiany miaraka aminy. 22Halainao ny saboran'ny ondralahy, ny hofany, ny safodrorohany, ny saron'atiny, ny voany roa mbamin'ny fonom-boany ary ny sorony havanana, fa ondralahy fanokanana io. 23Ao amin'ny sobika misy ny mofo tsy misy lalivay voapetraka eo anatrehan'ny Tompo, dia angalao vonga-mofo iray sy mofo mamy miharo diloilo iray ary mofo mamy manify iray. 24Dia hapetrakao eo amin'ny felatànan'i Aarona sy amin'ny felatànan'ny zanany avokoa ireo zavatra ireo, ka hahevahevanao ho fanatitra ahevaheva eo anatrehan'ny Tompo. 25Rahefa izany hoesorinao eo an-tànany ireo ka hodoranao eo ambony otely, ambonin'ny sorona dorana, ho hanitra ankasitrahana eo anatrehan'ny Tompo: sorona atao amin'ny afo ho an'ny Tompo izany. 26Ary halainao ny tratran'ny ondralahy izay nenti-nanokanana an'i Aarona, ka hahevahevanao ho fanatitra ahevaheva eo anatrehan'ny Tompo: io no ho anjaranao. 27Amin'ny ondralahy fanokanana, amin'izay anjaran'i Aarona sy amin'izay anjaran'ny zanany, dia hohamasininao izay efa voahevaheva sy izay efa voasandratra, dia izao avy: ny tratra voahevaheva sy ny soroka voasandratra: 28izany no ho anjaran'i Aarona sy ny zanany, tsy maintsy hafoin'ny zanak'Israely ho azy ireo mandrakizay; fa fanatitra voasandratra izany, ary ny zanak'Israely tsy maintsy hanokana fanatitra avy amin'ny sorona fisaorana, fanatitra atokany ho an'ny Tompo.
29Ny fanamiana masin'i Aarona dia ho an'ny zanany handimby azy koa, ka hatafy azy izany, rahefa avy izay hanosorana azy sy hanokanana azy; 30ka hitafy izany mandritra ny hafitoana, izay anankiray amin'ny zanany ho tonga mpisorona handimby azy; dia izay hiditra ao an-trano lay fihaonana, hanao ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina.
31Halainao ny ondralahy fanokanana, ka handrahoinao eo amin'izay toerana masina ny henany. 32Dia hohanin'i Aarona sy ny zanany eo anoloan'ny trano lay fihaonana ny henan'ny ondralahy, sy ny mofo ao anatin'ny sobika. 33Toy izany koa no hihinanany izay nanaovana ny fanoneram-pahotana tamin'ny nanokanana azy sy nanamasinana azy; tsy hisy olon-kafa hihinana amin'izany, satria zava-masina izany. 34Raha misy sisa tsy lany ka tra-maraina ny hena avy amin'ny fanokanana sy ny mofo, dia hodoranao izany fa tsy hohanina, satria zava-masina.
35Izany no hataonao amin'i Aarona sy ny zanany, araka ny didy rehetra nomeko anao. Hafitoana no hanokananao azy. 36Vantotr'ombalahy iray isan'andro no hatolotrao ho sorona noho ny ota, ho fanoneram-pahotana. Izany fanonerana izany no hanavotanao ny fahotana amin'ny otely, dia hanosotra azy hianao, hanamasinana azy. 37Hafitoana no hanaovanao fanoneram-pahotana ho an'ny otely sy hanamasinanao azy, dia ho masina indrindra ny otely, ary ho masina avokoa izay hikasika ny otely.
38Izao no hatolotrao eo ambonin'ny otely: zanak'ondry efa iray taona, roa isan'andro tsy tapaka. 39Ny iray amin'ireo zanak'ondry ireo hatolotrao ny maraina, ny iray kosa hatolotrao amin'ny àty takariva. 40Miaraka amin'ny ondry voalohany, hatolotrao koa ny lafarina tsara indrindra ampahafolon'ny efah voadity tamin'ny diloiloin'oliva, voatoto, ampahefatry ny hina, ary divay ampahefatry ny hina ho fanatitra araraka. 41Ny zanak'ondry faharoa hatolotrao amin'ny àty takariva dia hampombainao fanatitra sy divay hatao fanatitra araraka toraky ny tamin'ny maraina, ankasitrahana ny fofony, sorona atao amin'ny afo ho an'ny Tompo. 42Sorona dorana tsy tapaka izay tsy maintsy hatolotrareo amin'ny taona mifandimby ao amin'ny fidirana ny trano lay fihaonana, eo anatrehan'ny Tompo, dia eo amin'izay hihaonako aminareo mba hitenenako aminao. 43Fa hihaona amin'ny zanak'Israely eo aho, ka ho voahasin'ny voninahitro izany fitoerana izany. 44Hohamasiniko ny trano lay fihaonana sy ny otely, hohamasiniko Aarona sy ny zanany, mba ho mpisorona manao fanompoana ahy. 45Honina eo afovoan'ny zanak'Israely aho, dia izaho no Andriamanitr'izy ireo. 46Ho tantany fa izaho Iaveh no Andriamanitr'izy ireo, izay namoaka azy tany amin'ny tany Ejipta, mba honenako eo afovoan'izy ireo, dia izaho Iaveh Andriamaniny.
1Hanao otely fandorana emboka hianao, hataonao amin'ny hazo akasià; 2iray hakiho ny lavany, iray hakiho ny sakany, ka hitovy ny lafiny efatra, ary roa hakiho ny hahavony; hiray aminy ny tandrony. 3Hopetahanao takela-bolamena madio ny tampony, ny lafiny manodidina, ny tandrony, ary hasianao koronosy volamena manodidina izy. 4Hanaovanao masom-bolamena roa izy eo ambanin'ilay koronosy eo amin'ny rirany roa, hataonao amin'ny laniny roa, hidiran'ny bao hitondrana azy. 5Hataonao amin'ny hazo akasià ny bao, ary hopetahanao takela-bolamena izy. 6Io otely io dia hapetrakao manatrika ny efitra lamba izay eo anoloan'ny fiaran'ny vavolombelona, manatrika ny fanaovam-panavotana izay eo ambonin'ny vavolombelona, dia eo amin'izay hihaonako aminao. 7Eo no handoroan'i Aarona ny emboka; isa-maraina no handoroany azy, rahefa mamboatra ny lalampy izy; 8ary isaky ny àty takariva koa no handoroany azy, rahefa mametraka ny lalampy eo amin'ny fanaovan-jiro izy. Emboka manitra mandrakizay eo anatrehan'ny Tompo izany amin'ny taranakareo. 9Aza misy atolotrareo eo ambonin'io otely io, na ny zava-manitra tsy masina na ny sorona dorana na ny fanatitra, ary aza araraka eo ny fanatitra araraka. 10Eo amin'ny tandrok'io otely io no hanaovan'i Aarona ny fanoneram-pahotana indray mandeha isan-taona; ny ran'ny sorona fanoneram-pahotana no hanaovany ny fanoneram-pahotana no hanaovany ny fanoneram-pahotana ao, indray mandeha isan-taona, hatramin'ny taranaka mifandimby. Ho masina indrindra amin'ny Tompo io otely io.
17Niteny tamin'i Moizy koa Iaveh nanao hoe: 18Hanao tavy varahina, misy faladiany varahina, hatao fiafanana hianao, ka hapetrakao eo anelanelan'ny trano lay fihaonana sy ny otely, 19dia hasianao rano, hangalan'i Aarona sy ny zanany hanasany ny tànany aman-tongony.
Pejy: Voalohany < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2619 seconds